यत्रो दुस्साहस किन ? :: NepalPlus
यत्रो दुस्साहस किन ?
अक्षर अध्यता२०७७ असोज ७ गते १७:३१
झट्ट हेर्दा तपाइलाई पुरुषका यस्ता व्यवहार सामान्य लाग्ला । तर यस्ता व्यवहारले महिलालाई मानसिक रुपमा निकै आघात पुर्याएको हुन्छ । तपाई हुर्किएको समाजले तपाईकी दिदि बहिनी भन्दा बढि स्वतन्त्रता दिएर हुर्कायो । उसले भन्दा बढि महत्व पाउनु भनेको तपाईले उसमाथी नै हैकम लाद्न चाहिँ पक्कै हैन । समग्र महिलालाई कमजोर आँकलन गर्नको लागि पनि हैन । यो पुरुषमा भएको गलत मनोवृतिको उपज हो । छोरीलाई भन्दा छोरीलाई महत्व दिएर हुर्काउने हाम्रो समाजको उत्पादन हो ।
यस्तै प्रश्नको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । उनीहरुको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि महिलाहरु भनेको सार्वजनीक वस्तु हुन्, पुरुषलाई मन लाग्नासाथ घुम्न, डुल्न ……..गैदिनुपर्ने । छि कति निच सोचाई । कति गिरेको चेतना ? के महिलाहरु एक्लै खुशी हुन, रमाउन, सार्वजनिक ठाउँमा घुम्न जान सक्दैनन् ?
एकदिन अफिसको काममा नै व्यस्त थिएँ । वाइफाई अन नै गरेर काम गरिरहेकी थिएँ । आफूलाई निकै भद्र र चरित्रवान् भन्ने सरकारी कर्मचारीले मोवाइमा म्यासेज पठाए । म्यासेजमा थियो “अध्यता ब्याड्ली यु यार । पानी पनि कति परिरहेको । यो झरीमा दुई चार रात तिमीसँग हुन पाए जिन्दगीको स्वादै फेरिन्थ्यो । कति त्यहि मात्रै काम गर्छ्यौ ? मैले भनेको मान न, म तिमीलाई राम्रो ठाउँमा सेटल गराइदिन्छु । म तिमीबाट सबथोक चाहन्छु ।”